(Akhriso):-Aduunka si deg deg ah ayuu isku badalayaa. – Hareerley News
1988 shirkad Kodak la yiraahdo waxaa u shaqeyn jiray 170kun oo shaqaale waxayna soo saari jiray aalad walbo wax lagu sawiro waxaana la aasaasay 1890 laakiin markii 2004ta ahayd shirkadii way kacday oo way falistay, waxa shirkadaas ku dhacayna shirkado badan ayuu ku dhici doonaa.
Programingka ayaa dhib wayn u geystay sababtoo ah mobeel walbo wuxuu leeyahay kaamirad wax sawirta cid aadayso oo kasoo gadanayso kaamirad ayaa yartaay.
Tusaale ahaan shirkada Uber waa shirkada ugu wayn dunida ee taksiyada xukunta hadana ayada hal taksi malahan,sidoo kale waxaa jirta shirkad la yiraahdo Airbnb oo hooteelo badan hoos tagaan ayadana hal hoteel malahan.
Aqliga gacan ku sameyska ah ee bini aadanka sameeyay sida kumbuyuutarada ayaa ka badiyo wax walbo dad badan oo nool,tusaale ahaan mareykanka dhalinyarada soo bartay qaanuunka waxaa ku adkaanayso inay shaqo helaan sababtoo shirkad IBM la yiraahdo waxay sameysay kumbuyuutar la yiraahdo WATSON oo aad kala tashanaysid dhanka qaanuunka iyo sharciyada,talooyinka uu ku siinayana 90% waa sax , meesha qof bini aadan caadi ah markaad la tashatid uu hadalkiisa sax yahay 70%.
Kumbuyuutarada markii qofka kansarka la baarayo ayagaa si sax ah kugu sheegayo mesha iyo sida loo hayo taasoo xataaa ka hormarsan dhaqtarkii bini aadanka ahaa
Facebook waxay leedahay qaab ay u garato qofka sawirkiisa oo xataa aysan haysan FBI da mareykanka. Waxaana la filayaa 2030 in meelo badan aaladaha ay kaga hor mari doonaan bini aadanka.
Gawaariada lagu kalsoonaan karo: waa nooc gawaarida ka mid ah oo aanan u baahneen darawal,dhawr ka mid ah ayaa lasoo saaray 2018 waxaana loo badninayaa 2020 inay aduunka wada qabsan doonto,gawaarida caadiga ahna suuqa ka saari doonto,umana baahan doontid gaari inaad gadatid sababtoo ah mobeelkaaga ayaad uga yeeraysaa meshaad rabtidna way ku geynaysaa,waxaana falisi doono shirkado badan oo soo saara gawaarida,waxaana hari doono suuqa soo gali doono Google iyob Apple iyo Tesla . Gawaarida badankooda waxay noqon doonaan 2022 kadib kuwa ku shaqeeyo koronto looma baahnaan doono shidaal waxaana yaraan doono wasakhda ka dhalata gawaarida,magaalooyin badana waxay noqon doonaan kuwo qurxoon.
Dhanka caafimaadka:waxa so bixi doono apps aad kala socon kartid ama qiyaasayo xaalad walbo oo aad mareysid ilaa qofka marka danbe la gaarsiiyo inuu heli karo caafimaad wanaagsan.
3D daabacaad heer sare ah,markii hore in wax la daabaco qaali ayay ahayd qiimahana wuxuu ahaa 18kun dollar laakiin hada markii la helay 3D printing wuxuu noqday raqiis 400$,shirkadaha kabaha sameeyo iyo kuwa diyaaradaha iyo kuwa mobeelada 3D printing ayay isticmaali doonaan,marka 2027 la gaaro dunida badankeeda ayay ku faafi doontaa
Fursadah shaqooyin 20ka sano ilaa 30ka sano soo socdo shaqooyin badan aan naqaanay ayaa la wayn doonaa dadkana waxay ka shaqeyn donaan shaqooyin ka duwan kuwa aan hada naqaano
Beeraha waxaa la soo saari doonaa Robbot beeraha ka shaqeeyo qiimihiisa yahay 100$ wax walbo ayuu ku qabanayaa
Dareenka bini aadanka:hada waxaa jira apps la isticmaalo oo kuu sheegayo xaalada aad ku jirtid iyo waxa aad dareemaysid,mar dhawna waxaa mobeelada loo sameynayaa qaab lagu ogaan karo qofka beenta sheegayo applicationo ah.
Waxaa la wadaa qorshe ah in bini aadanka cimrigiisa la dheereeyo oo ilaa 100 sano uu gaari karo asagoo caafimaad qaba,waxaana la rajeynayaa in howshaas bilaabato 2036
Waxbarashada waxay noqon doonta mid moobeelada wax lagu barto ama kumbuyuutarada
Maqaalka waxaa qoray oo aan kasoo tarjumay Dr Robert Goldman
Hadad nagu cusub tahay Like dheh pagka kuma Dhaafayaan wixi Lasoo Galiyo yuulkatv.